Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany karana ankehitriny saika manerana ny firenena
Ny IATO dia manaparitaka ny rantsany amin'ireo faritra Rajasthan, Uttar Pradesh, Sikkim, Andaman ary Nicobar, ary Manipur ary Tripura.
Ny tobin'ny fikambanana dia nitombo hatrany amin'ny Uttarakhand, Ladakh, Lakshadweep, Dadra, Nagar Haveli, Daman, ary Diu.
Ny drafitra fanitarana dia tanjona hatrizay ho an'ny Komity Mpanatanteraka ao amin'ny fikambanana.
Ny vitan'ny IATO dia any amin'ny faritra rehetra amin'ny firenena ankehitriny.
Ny komity mpanatanteraka ny Association Association of Tour Operations (IATO) Indiana dia nanadihady sy nanamboatra ny toko isam-paritany sy ny fanjakana mba hanitarana ny elany sy hanamafisana ny tobin'ny mpikambana ao Uttarakhand, Ladakh, Lakshadweep, Dadra, Nagar Haveli, Daman, ary Diu.
Mitohy, IATO nanitatra ny elany tamin'ny alàlan'ny fanendrena ny co-chairman sy ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy faritany fivondronana.
Rajasthan, izay fanjakana goavambe manana ny maha-mpikambana azy mafy, dia noheverina fa manana ny filoha lefitra ary Andriamatoa Mahendra Singh avy amin'ny Holidays N Vaccations, Jaipur, dia notendrena ho co-chairman an'ny Rajasthan.
Elaela tao amin'ny drafitry ny IATO Ny komity mpanatanteraka dia manana mpiara-mitantana ny Uttar Pradesh izay tokony hipetraka ao Varanasi, mitazona hatrany ny maha-zava-dehibe an'i Varanasi ho mpizahatany lehibe ho an'ny mpizahatany iraisam-pirenena sy eto an-toerana, ary Andriamatoa Bhuvanendra Vikram Singh avy amin'ny Prime Value Tours Pvt. Ltd. dia nomena io andraikitra io.